Izindleko zamandla okuqhuba imoto kagesi ngaphezu kweminyaka eyishumi okungenani ziphindwe ka-30 kunentengo yokuqala yokuthenga. Ngokusetshenziswa kwamandla okubhekele iningi lezindleko zokuphila konke, uMarek Lukaszczyk womenzi wezimoto nokushayela, i-WEG, uchaza izindlela ezinhlanu zokwenza ngcono ukusebenza kwamandla kagesi. Th ...
Uhlobo lwakamuva lwesifundo semakethe se-2020 ku-Asynchronous Motor Market equkethe i-103 enamathebula wedatha yemakethe, amashadi, amagrafu, namanani okulula ukuwaqonda ngokuhlaziywa okujulile okukhonjisiwe. Ubhubhane lweCoronavirus (i-COVID-19) luthinte zonke izingxenye zempilo emhlabeni jikelele. Lokhu kune ...
IZhejiang Lijiu Motor Co, Ltd. (ngemuva kwalokhu ebizwa ngokuthi "iZhejiang Lijiu Motor") itholakala eTaizhou, Zhejiang, lapho kuzalwa khona umnotho wangasese. Ngokuncika esiyingini esikhulu sezomnotho seYangtze River Delta, indawo ezungezile iphakeme. Ku-2 kuphela ...